Nepalistudio » यौन सम्पर्क गर्दा फाईदा फाइदा, हेर्नुहाेस् के के छन् फार्इदाहरू ? यौन सम्पर्क गर्दा फाईदा फाइदा, हेर्नुहाेस् के के छन् फार्इदाहरू ? – Nepalistudio
यौन सम्पर्क गर्दा फाईदा फाइदा, हेर्नुहाेस् के के छन् फार्इदाहरू ?
यौनलाई पनि मानव जीवनको अपरिहार्य कुराका रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यौन जीवन राम्रो भएमा मान्छे खुशी हुन सक्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुको ठहर छ । यौन सम्बन्ध केवल यौन सुख, भावनात्मक सामिप्यता तथा सफल दाम्पत्य जीवनका लागि मात्र आवश्यक छैन यसका अन्य विभिन्न खाले फाइदा पनि भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यौन सम्पर्क गर्दा हुने फाईदाहरु यसप्रकार छन्–